မြစ်ဆုံ: တွေ.ရမြင်ရခဲသော ကချင်ယက္ကန်းအက
ကျနော် ၏ အဘိုးအဘွားများကတည်းကပင် အမျိုးများ အားလုံးနီးပါး ပုဂံညောင်ဦးဘက်မှနေ၍ ကချင်ပြည်နယ်ဘက်သို. ပြောင်းရွှေ.နေထိုင်ခဲ.ကြတာ ယနေ.ထိတိုင်ပင် ဖြစ်တယ် ။ ကျနော်တို.မြို.လေး၏ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာသကြားစက်ရုံကြီးမှာအဘိုးအဘွားတို.စတင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရင်းနဲ.ထိုမြို.လေးမှာဘဲ
မွေးဖွားကြီးပြင်လာခဲ.တာ အိမ်ထောင်ကျ အစ်မတစ်ယောက်နဲ.ကျနော်တို.ကိုရလာတဲ.အထိပေါ.။ ကျနော် သည် ကချင်ပြည်နယ် မှာမွေးပြီး ကြီးပြင်းလာခဲ.သော ကချင်ပြည်နယ် သား စစ်စစ်ပင်ဖြစ်ပေတော.သည်။
ဦးလေးနဲ.အဒေါ်တို.မှာ ကျောင်းဆရာ/မများ ဖြစ်တော.အိမ်တွင်စာလာကျက်ကြသောကျောင်းသားများနဲ.
ကျောင်းပိတ်ပြီဆိုတာနဲ. သူတို.ရဲ. တောင်ယာများသို.လိုက်လည် လေ. ရှိပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ဆွတ်မိုင်တူး၏ အဖွား ချက်ကျွေးသော သစ်သီး သစ်ဖု များနဲ.ထမင်း မှာ ဒီအချိ်န်ထိကို မမေ.သေးပါဘူး။ မျိုးအောင် မြှောက်ပေးလို. ဘာမှန်းမသိဘဲ ကချင်မလေး တစ်ယောက်ကို နမ်ဖဲ.ငါစောရအိုင်လို. သွားပြောတော. ကိုင်ထားတဲ. ထီးနဲ. လိုက်ရိုက်တာ တန်းနေအောင် ထွက်ပြေးခဲ.ရသည်။ နောက်တော.မှ ကျနော်ပြောတဲ. စကားအဓိပ္ပါယ်ကို သိတော. ဟဲဟဲ ကျနော် ရည်စားစကားပြောလိုက်တာဘဲပေါ.။
ကချင်မလေးက ဦးလေးရဲ. တပည်.၊တိုင်ပြောလိုက်ရင်ကျနော် တော. ကျောကော.တော.မှာလေဟဲဟဲ။
ကျနော်.ကိုလည်း ဆရာ. တူမှန်းမသိလို.နေမှာပါ။ ဦးဦးဖျားဖျား အခင်းထဲမှထွက်သော သစ်သီးများကို ဆရာ ဆရာမ တွေကိုပေးတတ်သော သူတို.ရဲ. အမူအကျင်.လေးတွေကလည်း ချစ်စရာပင်။ ကြက်သား ကချင် ချက်ကတော. လုံးဝ ကောင်းတယ် ဗျာ-ငရုတ်သီးစပ်စပ်နဲ.ဆိုတော.ကျနော်.အကြိုက်မဟုတ်လား။
ရှေ.ကို သုံးလှမ်း နောက်တစ်လှမ်းနဲ. ထောင်ကာအကလည်း သင်ပေးမယ် -- ဘယ်ညာ ခြေကိုခွဲ အစရှိသောသီချင်းဖြင်. ကချင်ထောင်ကာအက မှာ ငယ်စဉ်ကတည်းက အနှစ်သက်ဆုံး သီချင်း တစ်ပုဒ် ဖြစ်ခဲ.ပါတယ်။ Z ဒီးလာ ၏ လောပန်းလောင်းတို.ပျော်ရာမြေ ကတော.ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ကျောက်စိမ်းမြေမှဘဝလေးများကိုဖွဲ.နွဲ.သီဆိုထားသောသီချင်းများပါ။ ဇော်ဒိန် ဇော်ဒန် စသော ကချင်သရုပ်ဆောင်များကလည်း သရုပ်ဆောင်တာ တော်တော်လေးကို ကောင်းပါတယ်။
သူတို.ဇတ်ကားတွေကလည်းဖိုက်တင်ကားတွေဆိုတော.ကချင်သီဟတင်စိုးလို.တောင် ပြောလို.ရမယ်။ ကလေးတုန်းကဆို အမြဲကြည်.ဖြစ်တယ် ကချင်ဇတ်ကားတွေကို။ အကုန်လုံးတော.နားမလည်ပေမယ်. သူငယ်ချင်းတွေက ဘေးကနေ ဘာသာပြန်ပေးတော. အဆင်ပြေတယ်လေ။ ဟဲဟဲ အဲ.တုန်းကတော. မိန်.မိန်.ကြီးနဲ. ကြည်.ခဲ.တာကို ခုချိန်မှာလွမ်းနေမိပြန်ရော။ဒီအချိန်မှာတော.ကျနော်ငယ်သူငယ်ချင်းများနဲ. ခွဲပြီး အဝေးမှာရောက်နေပြီ။ သူငယ်ချင်းတွေလည်း နေရာစုံမှာ ဘဝစုံကို ဖြတ်သန်းနေကြမှာဘဲ။ ဇာတိ မနောမြေ နဲ. သူငယ်ချင်းတွေကို သတိရရင်း ကြည်.ရခဲသော ကချင်အကလေး တစ်မျိုးကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Posted by မောင်မောင် at 20:44
မဟုတ်ပါဘူး ကျနော်က ကချင်ပြည်နယ် မှာမွေးတဲ. ဗမာပါ